Shiinaha warshad been abuur ah oo loo yaqaan 'Gate Gate Valve' iyo soosaarayaal | Nortech
API602 Waalka iridda steel been abuur, Steel carbon been abuurtay, ahama, steel daawaha, ahama dabaq
salxanka alxanka TO ANSI B16.11
Flange ASME B16.5, Flange welded iyo flange muhiim ah
NORTECH waa mid ka mid ah Shiinaha Faallooyinka birta ah ee been abuurka ah Soo saaraha & Alaab-qeybiye.
Waa maxay API602 been abuur waalka albaabka?
API602 Faallooyinka birta ah ee been abuurka ah waa naqshad gaar ah oo leh cabbirka yar yar ee waalka.
waxay leedahay dhamaan astaamaha aaladaha albaabka. sida caadiga ah, qaybaha furitaanka iyo xirida waa iridda, qaab qaabeed, taasi waa sababta loogu magac daray waalka albaabka. jihada dhaqdhaqaaqa iridda waa mid ku tiirsan jihada dareeraha. Waalka albaabka ayaa si buuxda loo furi karaa oo gebi ahaanba la xidhi karaa oo aan la hagaajin karin oo la kala qaadi karo. Qalabka waalka ayaa loogu talagalay in loo isticmaalo si buuxda u furan ama gebi ahaanba xiran, sababtoo ah qaabka uukhtarradiisa oo leh qaab xajmi , haddii lagu shaqeyn lahaa qayb ahaan furnaan, waxaa jiri lahaa lumis weyn oo cadaadis ah dusha sare ee xirana waxaa qatar ku noqon doonta saameynta dareeraha.
laakiin ah API602 waalka albaabka been abuur ah waxay leedahay astaamo u gaar ah. waxaa lagu sameeyaa birta kaarboon been abuur ah, birta aan xarka lahayn, birta isku darsan, oo leh jir is haysta, oo ku habboon dareeraha cadaadiska sare leh.
Astaamaha ugu muhiimsan ee API602 faallooyinka birta been abuurka ah?
Astaamaha ugu muhiimsan ee API602 waalka albaabka been abuur ah
1) Kordhinta asliga oo leh acme labalaab sax ah hawlgal dhakhso leh.
2) Jidh si looxa wadajirka ah oo loogu talagalay in lagu dhejiyo xamuul isku mid ah goomaha si loo xaqiijiyo shaabad caddeyn ah oo daadata.
3) Wareeg adag
4) Isku xidhka Stem-gate ee loogu talo galay in culaysyada culus ee la saaray (albaabka ku dheggan), jirida ay ku fashilanto meel ka baxsan xuduuda cadaadiska sanduuqa.
5) Kursiga dambe ee loogu talagalay in lagu yareeyo cadaadiska dhabarka ee ku xirxiraya asliga markii si buuxda loo fariisto. Beddelidda xirmada jirridda ee cadaadiska laguma talinayo.
6) Xidhmada jirridda waxaa loogu talagalay xakamaynta ugu wanaagsan ee qiiqa qiiqa baxsadka ah ee u daadanaya hawada. Qiyaasta qulqulka qulqulka qulqulka ee aadka u hooseeya waxaa lagu xaqiijiyaa dhammeystirka wanaagsan ee aagga xididdada xididdada, hoos u dhigidda kala-soocsanaanta iyo xakamaynta toosnaanta asliga ah.
7) Khatarta Bellows ayaa la heli karaa haddii la codsado
8) Wareegyada kursiga dayax gacmeedku waxay bixiyaan kordhinta iska caabbinta, xoqida iyo nabaad-guurka dusha sare ee shaabadaynta.
9)Fadhiyada Kuraasta la balaariyay.
10) Xakamaynta qiiqa baxsadka ee baxsadka ah.
Faahfaahinta farsamada ee API602 faallooyinka birta been abuurka ah?
Qeexitaannada API602 waalka albaabka been abuur ah
Naqshadeynta iyo soosaarka API602 / BS5352 / ASME B16.34
Ballaca (NPS) 1/2 "-2"
Port (bore) Dekedda caadiga ah (bore bore) iyo deked buuxda (bore bore)
Qiimeynta cadaadiska (Fasalka) 800lbs-1500lbs-2500lbs
Qalabka jirka A105 / F11 / F22 / F304 / F304L / LF2 / LF3 / F316
Qalabka jar No.1 / No.5 / No.8, SS304 / SS316 / Monel
Alxanka godka ANSI B16.11
Dun ASME B1.20.1
Flanges ASME B16.5, Flange welded iyo flange muhiim ah
Bonnet Bolnet iyo Bonnet ayaa la dhajiyay 800lbs-1500lbs
Cadaadiska cadaadiska cadaadiska (PSB) 1500lbs-2500lbs
NACE NACE MR-0175 ama MR-0103
Tijaabinta iyo kormeerka API598
Codsiga API foojarka albaabka birta been abuurka ah
Noocan ah API 602 Faallooyinka birta ah ee been abuurka ah waxaa si weyn looga faa'iideystaa dhuumaha leh dareeraha & dareerayaasha kale. Batroolka, saliida, kiimikada, kiimikada, korontada iyo korontada iwm ， qaasatan xaaladaha looga baahan yahay socodka socodka sare, xirida adag iyo adeega dheer. Xulasho ballaaran oo ah qalabka qolofta iyo goynta ayaa daboolaya dhammaan noocyada kala duwan ee codsiyada, laga bilaabo nooca maalin kasta ee adeegga aan-wax-ka-qabashada lahayn illaa adeegga muhiimka ah ee leh warbaahin aad u dagaal badan.
Hore: Madax Been Abuur
Xiga: Faallooyin been abuur ah oo Globe Valve ah
waalka albaab been abuur ah
Waalka albaabka cadaadiska sare
Cadaadis xir xiran waalka albaabka